JINGHPAW KASA: နန်ဆန်ယန်ပါတ်ဝင်းကျင်၌ တိုက်ပွဲပြင်းထန်
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အို တပ်မဟာ (၅) အုပ်ချုပ်နယ်မြေဖြစ်သော နန်ဆန်ယန်ကျေးရွာ အနီးတ၀ိုက် တွင်ရောက်ရှိနေသော ဗမာစစ်တပ် ခမရ (၃၈၄)၊ (၃၉၀) တပ်များနှင့် ကေအိုင်အေ ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့နှင့် ပြည်သူ့ ဆက်ဆံရေးတပ်ဖွဲ့သို့ပူးပေါင်းကာ ဇန်န၀ါရီ (၃) ရက် ညနေပိုင်း (၃း၀၀) နာရီအချိန်၌ တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာ တစ်ဖန် ပြန်လည် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
There wasaseveral battle between join KIA public volunteer troop and KIA public relation troop and Burmese Government light infantry unit (384) and (390) near Nam San Yang villages at 03:00 PM, according to the KIA front line officer report.
KIO. KIA. Myu tsaw share shagan ni hte Jinghpaw Wunpawng Myusha yawng hte e...,Tinang Myit masin Hkum hkrang ma hkra hte..,Madu Yesu hkristu hte Yehowa God.. hta apnawng tawn da n-na. Kyu marawn hpyi jahtau let..,Kara sing gawng myipyi n-hting nut ai sha gap tik tik yaw...,